I-Tech - Mag emangalisayo
Amathuluzi we-6 we-Android Wonke Umthuthukisi Okufanele Aazi Ngaye
Kungani i-Android OS kuyindlela ekhethwa kakhulu konjiniyela? I-Android yenza izinto zibe lula futhi iyisistimu yokusebenza yeselula ehlukaniseka kalula kakhulu futhi esebenziseka kalula. Ukwethulwa kwamathuluzi amaningi kwenze kwaba lula konjiniyela bohlelo lokusebenza lwe-Android ukudala izinto ezintsha…
Izinhlelo Zokusebenza Ezinhle Zesimo Sezulu Zezikrini Zakho Zasekhaya ze-Android
Isimo sezulu se-APP sasingaphezu kokubikezela inhlanhla. Izinhlelo zikaLoti zitholakala kutholakale kalula. Ngakho-ke Awudingi ukulinda umbiko wesimo sezulu kuThelevishini, Ivumela iphaneli enhle ukuthi ikhethe. Abanye abasebenzisi beselula basebenzisa imali eningi ekufuneni…
IMorocco Yakha Isikhungo Sikagesi Esikhulu Kunazo Zonke Emhlabeni
by UKerry B.
Kwangathi 31, 2022
Kulinganiselwa ukuthi i-Ouarzazate Solar Power Station yaseMorocco maduzane izokwazi ukukhiqiza amandla awanele futhi avuselelekayo ukuhlinzeka amandla kubantu abangaphezu kwesigidi esisodwa. Amandla elanga akhiqizwa kulesi sikhungo azophinde abone izwe linciphisa ukukhishwa kwekhabhoni…
Okuhlangenwe nakho Okumangalisayo Ngokugcinwa Kwefayela kanye Nezinketho Zokwabelana Ku-Office 365
by UJohnny W.
Kwangathi 26, 2022
Izimpi zesitoreji phakathi kwabahlinzeki bensizakalo yamafu bezilokhu zifudumala ngokuthi ngubani ozohlinzeka ngokunikezwa kwesidleke kumasevisi abo. Nge-1 TB yesikhala esinikezwe iMicrosoft ku-365 yasiza ekuqedeni umncintiswano. Ngokunikezwa kwabadlali abantamo kule sevisi…
2 Amabhulokhi Wokwakha Abalulekile Ehhovisi Elibonakalayo
Ihhovisi elibonakalayo lisho ukuthi ngeke kusadingeka ukhathazeke ngokuphatha idatha yakho noma isicelo nomaphi lapho uya khona. Ngeke futhi kudingeke ukhathazeke ngokushiya idatha yakho ohlelweni olungalungile. Okuwukuphela kwento oyidingayo…
Izindlela ezi-5 Zokuthola Ukuthengwa Ngokulula, Okumaphakathi
Inqubo yokuthenga ephakathi nendawo isebenza kangcono kumabhizinisi azama ukusebenza kahle kakhulu futhi athole ukulawula ukuthengwa kwempahla. Ngaphandle kwenqubo ebekwe endaweni eyodwa, kungaba nzima ukuthola ukubonakala kwakho konke ukuthengwa kwempahla. Ukuqinisekisa ababambiqhaza mayelana nomsebenzi ophakathi nendawo akulula. Inguquko…
I-Batman V Superman Edition Ye-Galaxy S7 Edge Kungenzeka Ibe Emisebenzini
Isikhondlakhondla senkampani yaseNingizimu Korea iSamsung ihlela ukwethula uhlelo olukhethekile lwe-Galaxy S7 Edge, Iza nohlobo lwamahlaya, kulokhu kususelwa kuBatman vs Superman. Ngokusho kokushicilelwa kwakamuva, iSamsung Samsung S7 Edge, okuzobikwa ukuthi izokhishwa ngamaphephadonga, iringithoni. Ngonyaka odlule…
Izinhlelo zokusebenza ezi-3 Ezimangalisayo Zokuthuthukiswa Kwe-Android
by UMacy J
I-Android ibalwa njengengxenyekazi ebusayo ezimakethe zomhlaba. Kungahle kube ngenxa yokusebenziseka kalula nokusebenzelana okusebenzisanayo okuhlangenwe nakho komsebenzisi ngenkathi usebenzisa amadivayisi we-Android. Ngokwenhlolovo yakamuva, ama-81% wabantu bomhlaba wonke bangabasebenzisi be-android ngenkathi i…
I-isolation transformer yenziwe ngamakhoyili ethusi enxeba phezu komunye, futhi ngayinye yawo inikezwa umthombo wayo wamandla. Leli gama elithi 'i-isolation transformer' libhekisela ngokobuchwepheshe kunoma iyiphi i-transformer. Ngokucacile, i-transformer engakwazi ukuhlukanisa i-alternating current ku...
Lokho Esikwaziyo NgeWindows Phone Kuze Kube Manje
Esikwaziyo ngefoni yamawindi kuze kube manje Umlando: Ukubambisana kweWindows kuwuphawu lobuchwepheshe besimanje. Bekuyinhlangano yokuqala ukwenza isistimu yokusebenza yekhompiyutha ibe ngeyakho futhi isinike isikhombimsebenzisi esibonakalayo esithathele indawo eyandulelayo umugqa womyalo...
1 2 3 ... 81 Olandelayo